Ezomnotho ngokujwayelekile ku-Economics Finance | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iyini ibhili yokushintshana? Awazi ukuthi ikhokhiswa kanjani futhi ineziphi izici? Sichaza konke ngaye.
Awazi ukuthi kuzodingeka ukhokhe malini ngefa? Lapha sichaza ukuthi intela yamafa isebenza kanjani nokuthi ingabalwa kanjani.
Ungazi kanjani ukuthi ngabe ngisohlwini lwabaphambuki
Uyazi ukuthi luyini uhlu lwamahlongandlebe? Futhi wazi kanjani ukuthi ukunye wabo? Thola ngezansi, kufaka phakathi nokuthi ungaphuma kanjani.
Izilinganiso zikaDaniel Lacalle
Uma uthanda inkululeko yezomnotho, uDaniel Lacalle uzokuthakazelisa. Thola lapha imishwana ehamba phambili kaDaniel Lacalle kanye ne-biography yakhe.
Awuqinisekile yini ukuthi kwavunyelwani ku-Toledo Pact? Lapha sichaza isincomo ngasinye nokuthi savunywa nini.
Ngabe uxoshwe ngaphansi kwesibalo sokuxoshwa ngenhloso? Awazi ukuthi yini? Thola izici zayo, isinxephezelo nokuthi ungaqhubeka kanjani.
Uyazi ukuthi elinye lamalungelo akho omsebenzi ukucela ikhefu lokuzithandela lokungabikho emsebenzini? Uyazi ukuthi imayelana nani? Thola yonke imininingwane.
Uyasazi isibalo somhlanganyeli ozisebenzayo? Thola ukuthi kuyini, ngubani ongazuza kukho nokuthi yiziphi izidingo zokuqasha.
Ukwesekwa komndeni uhlobo lwenzuzo ongayicela ngemuva kokungasebenzi (noma uma ungenalungelo lalokho). Thola okuningi ngalokhu.
Thola lapha izinkulumo ezingamashumi ayisishiyagalombili ezihamba phambili zikaPaul Krugman, usomnotho onqobe umklomelo weNobel. Siphinde sakhuluma ngombono wakhe.
Awunalo uhlelo lwe-accounting lwenkampani yakho? Lapha sikunikeza izizathu zokuthi kungani kufanele utshale imali eyodwa ngokushesha okukhulu.
Ungatshala kuphi imali yami
Ungatshala kuphi imali yami, nawe uyazibuza? Sikunikeza ezinye izinketho okufanele wazi ukwenza isinqumo sokugcina.
Isitatimende Sabasebenzi yisimiso somthetho esilawula ubudlelwano bokuqashwa phakathi kwenkampani nomsebenzi. Funda kabanzi ngakho!
Uma ubheka ukukhuthaza ukucabanga kwakho okugxile, izingcaphuno zikaMilton Friedman zizokusiza. Futhi, sizokhuluma ngalo somnotho omkhulu.
Ngabe awucaci ngomqondo womnotho wezimakethe? Lapha sikuchazela ngohlu lwezinzuzo nobubi nesibonelo.
Uzwile ngezomnotho zesikali kepha umqondo awucaci kahle kuwe? Sikusiza ukuthi uyiqonde futhi wazi ukuthi isebenza kanjani.
Ngabe wazi kahle ukuthi iyini inkinga yomphakathi? Futhi kusithinta kanjani thina njengomphakathi nezwe? Thola umqondo wabo nezibonelo ezingezansi.
Uyazi ukuthi yini umncintiswano wokuzimela wedwa? Thola izici zayo, izinzuzo zayo nokuthi yiziphi izinkampani ezingomncintiswano wokuzimela wedwa
Ubuwazi ukuthi kukhona inguquko yesithathu yezimboni? Thola lapha ukuthi kuyini, ukuthi yaqala nini nezinguquko ezingadala.
Wake walizwa igama elithi budget operating kodwa ungazi ukuthi liyini? Lapha sichaza ukuthi kuyini, ukuthi ungakwenza kanjani nokuningi.
Izilinganiso zikaJoseph Stiglitz
Funda kabanzi ngomnotho wolwazi, ukuhwebelana kwembulunga yonke, kanye nemakethe yamasheya ngezingcaphuno ezivela kuJoseph Stiglitz. Lapha uzothola okuhle kakhulu.
Uyazi ukuthi yini i-oligopoly? Yiziphi izici abanazo noma kungani kunezithiyo? Thola yonke imininingwane ngaleli gama.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini i-GDP? Yiziphi izinhlobo ezikhona noma yini umsebenzi wazo? Thola ngezansi bese ufunde kabanzi ngale nkomba yezomnotho.
Ukukhula komnotho: kuyini, kubangelwa, kukalwa kanjani
Wake wazibuza ukuthi kungani izwe likhula? Yiziphi izinkomba ezithi kukhona ukukhula komnotho? Thola.
Yini i-Model 130
Uyazi ukuthi imodeli eyi-130 ye-Tax Agency iyini? Thola ukuthi yenzelwe ini, ngubani okufanele ayethule nokuthi ungayigcwalisa kanjani ngendlela efanele.
Thola ukuthi yini ezomnotho, yiziphi izinhlobo ezikhona, yini into yokufunda kanye nemininingwane eminingi ngalo mqondo obalulekile.
Izinkulumo zikaRobert Kiyosaki zigcwele izeluleko ezinhle. Uma ungumuntu osemusha noma umtshali-zimali osezingeni eliphezulu, ungaphuthelwa yibo.
Uyazi ukuthi liyini inani le-cadastral? Futhi kungani kuhlobene nentela? Thola ngezansi kwakho konke odinga ukukwazi.
Uyazi ukuthi yini okubanjwayo? Futhi ukuthi kunezinhlobo eziningi zokubanjwa? Thola konke odinga ukukwazi ngalelo nani lemali.
Ngabe ufuna izeluleko zokutshala imali? Imishwana kaPeter Lynch izokuqondisa ohambweni lwakho emhlabeni wezezimali, ungaphuthelwa yibo.
Thola umqondo womnotho omnyama nakho konke okwenza abantu basebenze 'kwa-B' esikhundleni sokukhokha intela.
Uma ufuna indlela yokwenza imali ekhaya futhi ungaqiniseki ukuthi wenzeni, nayi eminye imibono yesimanje esebenzayo.
Uma ufuna ukugqugquzela umsebenzi wakho wezezimali, amabinzana kaGeorge Soros azokusiza. Thola kabanzi mayelana nalo zimali omkhulu.
Uqinisekile ukuthi uyazi ukuthi i-inflation iyini, kepha kuthiwani nge-hyperinflation? Lapha sikunikeza incazelo ye-hyperinflation nokuthi ungayilawula kanjani.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-SEPE isho ukuthini ngemininingwane ehlukile? Thola konke odinga ukukwazi mayelana nedatha yokuqhathanisa ye-SEPE.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiliphi ikheli lentela? Futhi indawo yokuhlala yentela ihluke kanjani kunenhlalo? Thola konke lapha.
Thola lapha izingcaphuno eziyi-15 ezinhle kakhulu zomtshali-zimali uBenjamin Graham. Ungathola futhi kabanzi nge-biography yakhe futhi utshale imali.
Inzalo elula nehlanganisiwe
Uyazi ukuthi yini intshisekelo elula nehlanganisiwe? Uyazi ukuthi yini umehluko wabo? Futhi ibalwa kanjani? Thola konke okungezansi.
Izilinganiso zikaRay Dalio
Ukuze sifunde ukutshala imali kahle, kufanele sinake okungcono kakhulu. Izinkulumo zikaRay Dalio zizokusiza uzikhuthaze futhi ufunde izinto ezintsha.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ukuhweba kuyini, yiziphi izimakethe ezinhle kakhulu nokuthi yini okufanele uyenze ukuze uqalise, lapha sikutshela okhiye.
Ungafunda kanjani ukutshala imali emakethe yamasheya
Uma ufuna ukufunda ukuthi ungafunda kanjani ukutshala imali emakethe yamasheya bese sikunikeza okhiye bokukwenza ngokuphepha nangesinyathelo ngesinyathelo.
I-Keynesianism noma i-Keynes model ingumqondo obaluleke kakhulu kwezomnotho. Thola ukuthi imayelana nani nokuthi ihlangana kanjani nempilo yansuku zonke.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungabeka kanjani imali kuma-cryptocurrensets, lapha sikhuluma ngakho konke odinga ukukwazi ngama-cryptocurrensets nokuthi ungakwenza kanjani.
Kulesi sihloko sizokhuluma kancane ngomtshalizimali uCharlie Munger, uthando lwakhe lwe-psychology kanye nemishwana yakhe engama-70 edume kakhulu futhi ekhuthazayo.
Uma ufuna ukuqala ukutshala imali oyilondolozile futhi ungazi ukuthi ungawathenga kanjani amasheya, kule ndatshana sizokuchazela wona.
Thola lapha imishwana engama-25 edume kakhulu kaWarren Buffett, indoda yesine ecebe kakhulu emhlabeni, ezokusiza ukuthi ubonise futhi ikushukumise.
Impela ngezikhathi ezithile uzwile ngezikweletu zeMgcinimafa, noma nezama-State Bonds. Uyazi ukuthi yibo? Futhi umehluko wabo?
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yini iCapex? Noma wehluke kanjani ku-Opex? Amanani eCapex? Thola konke ukungabaza ngalo mqondo.
Abantu abacebe kakhulu emhlabeni
Ngabe ufuna ukuthola ukuthi obani abantu abacebe kakhulu emhlabeni? Ngokusho kwephephabhuku iForbes, lezi yizona ezihlala kwabangu-10 abahamba phambili.
Uyifaka kanjani imali kwi-ATM
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungayifaka kanjani imali ku-ATM? Ngakho-ke lapha sikhuluma ngakho konke odinga ukukwazi ngakho ngamabhange ahlukene.
Imiqondo emibili okufanele uyazi yi-cadastre kanye nereferensi ye-cadastral. Uyazi ukuthi sikhuluma ngani? Thola ngezansi.
Indlela yokutshala imali
Ngabe ufuna ukubeka lokho okulondolozile ukuze usebenze kepha awazi ukuthi uzoqala kuphi? Lapha sichaza ukuthi ungayitshala kanjani imali.
Ngaphakathi komkhakha wezezakhiwo, amagama umninindlu nomqashi yizona ezimbili ezisetshenziswa kakhulu. Eqinisweni, ...
Yiziphi izigaba zokwenziwa
Uma ungacaciswanga kahle ukuthi ayini amakilasi okwenziwa, amalungelo afakiwe nokuthi izimpesheni zabo zisebenza kanjani, ungaphuthelwa yile ndatshana.
Yini i-Agency Agency
Lo mbhalo uchaza ukuthi yini i-Agency Agency, ukuthi iyini inhloso yayo nokuthi ingaphathwa kanjani imbuyiselo yentela.
Uyini umkhakha wemfundo ephakeme
Uma ungazi ukuthi uyini umkhakha wemfundo ephakeme, le ndatshana ichaza konke odinga ukukwazi ngakho: Iyini imisebenzi yayo nokwakhiwa kwayo.
Uyazi ukuthi siyini isisekelo sokulawula? Futhi ubale isisekelo sokulawula? Lapha uzoba nezibonelo ezimbalwa zokuyithola igxathu negxathu.
Ukuhlaselwa kwe-cyber kwakamuva ku-SEPE nemiphumela yako
Ukuhlaselwa kwe-cyber kwakamuva ku-SEPE akuholelanga ekwebeni idatha. Kodwa-ke, kunemiphumela ezama ukuxazululwa.
Ugcwalisa kanjani ifomu 390
Uma ufuna ukwazi ukuthi ugcwalisa kanjani ifomu elingu-390, lapha sikunikeza izinyathelo namaphuzu okufanele uwanake lapho uwenza.
Siyini isisekelo sokulawula
Uma ufuna ukwazi ukuthi siyini isisekelo sokulawula nazo zonke izici okufanele uzicabangele ngalo mqondo, lapha uzokuthola.
Uma ufuna ukuguqula indawo ibe yikhaya, lapha unokhiye ozokutshela ukuthi ungakwenza noma cha kanye nezinyathelo uma kunjalo.
Isitifiketi sencwadi yamafa wokugcina
Thola ukuthi siyini isitifiketi sokugcina sencwadi yamafa, ukuthi ungasithola kanjani nezinyathelo okufanele uzithathe ukuthola lo mbhalo.
Ngabe udinga ukucela impilo yomsebenzi? Ungakhathazeki, ungahlala ukhetha ifoni. Uyicela kanjani impilo yomsebenzi ngocingo lwamahhala
Thola ukuthi yimaphi amabhidi asekhaya, izizathu zokuthi kungani kufanele uwabheke nokuthi ungazenza kanjani isinyathelo ngesinyathelo kuwo.
Uma ufuna ukufaka uphawu lwesiteleka ngeselula futhi ungazi ukuthi ungasenza kanjani, noma izinzuzo ezilethwa kuwe, lapha sikhuluma ngazo zonke.
Uma ufuna ukwazi ukuthi yini ukusizakala kokungasebenzi nokuthi ungakwenza kanjani, lapha sibonisa ukungabaza okungenzeka kube khona.
I-NPV ne-IRR Angamathuluzi amabili anamandla kakhulu wezezimali wokuhlola inzuzo. Yini i-NPV? Iyini i-IRR? Yithole lapha
Siza ngemuva kokungasebenzi
Uma ukungasebenzi kwakho kuphelile futhi namanje awusasebenzi, uyazi ukuthi kunezinzuzo ngemuva kokungasebenzi ongazicela? Sikukhombisa zona.
Thola ukuthi ngabe umshwalense wemoto ngokweqile noma ngaphandle kwemali eyeqile ungcono. Yize zombili zilungile, konke kuzoncika kuphrofayela yakho nasekushayeleni.
Uma kufanele wethule iFomu 349 futhi ungazi ukuthi liyini nokuthi uligcwalisa kanjani, lapha sizochaza konke okudingayo ngakho.
Thola ukuthi siyini isimemezelo sezindlalifa, umqulu wokuthola ifa lomuntu oshonile. Wenza kanjani? Kubiza malini?
Ukuthatha umhlalaphansi kancane
Thola ukuthi kusho ukuthini ukuthatha umhlalaphansi okuyingxenye, yiziphi izinhlobo zomhlalaphansi oyingxenye ezikhona nokuthi kufanele uzicele kanjani uma uzifuna
I-SEPE ingumzimba osondelene kakhulu nomsebenzi. Thola ukuthi iyini imisebenzi yayo nokuthi ingakusiza kanjani ukuthola umsebenzi.
Ilivu yokunakekela izingane
Ikhefu lokungabikho lokunakekelwa kwengane liyithuluzi okufanele ukwazi ukumisa ngalo ubudlelwano babasebenzi isikhashana. Thola okuningi.
Thola lonke ulwazi oludingayo mayelana nentela yomgwaqo: iyini, ngubani okufanele ayikhokhe, malini, kanjani futhi kanjani.
Ukungasebenzi okuzimele kuyisibalo esaziwa kanjalo, kepha empeleni ukuphela kwebhizinisi. Thola okwengeziwe ngalo mkhuba.
Ingqikithi yokukhubazeka unomphela
Thola ukuthi yini ukukhubazeka okuphelele ngokuphelele: izici, izinhlobo, inani, izidingo nokuthi ungakufaka kanjani isicelo ku-Social Security.
Ngilishintsha kanjani ikheli lami ku-Social Security?
Thola ukuthi ungalishintsha kanjani kalula ikheli lakho Lokuphepha Komphakathi kanye nesinyathelo ngesinyathelo Ukuze inqubo isheshe futhi ngaphandle kokungaqondani.
Iholo lingezinye zezinhlobo zomholo womsebenzi womuntu, kepha yini ngempela umholo? Ngabe ihlobene nomholo omncane?
Sikutshela ukuthi yini okuguqukayo kwe-macroeconomic nokuthi kusiza kanjani ukuthola uhlobo lomsebenzi wezomnotho ezweni.
Incazelo yokuthi isilinganiso segolide sesiliva siyini, sibalwa kanjani, idatha yomlando, nokuthi ungabona kanjani uma umzuzu ulungile ukutshala imali
Sichaza ukuthi yini iholo eliphansi kanye nomholo wangempela. Zihluke kanjani futhi ziyithinta kanjani imali engiyiholayo?
Bangena ngasiphi isikhathi esitelekeni?
I-athikili emayelana nokuthi isiteleka singena ngasiphi isikhathi, yiziphi izinkinga ezingavela, nezimbangela nezincazelo ezivame kakhulu.
Inkontileka yokusiza ingenye yezinhlobo zezinkontileka ezenziwayo zokufaka esikhundleni somqashwa othathe umhlalaphansi kancane.
Ngingasebenza ngokuba ku-ERTE
Ngingasebenza ngenkathi ngiku-ERTE? Uma unikezwe umsebenzi futhi ukulesi simo, thola ukuthi ungawenza yini nemiphumela yawo.
Imali encane engenayo
Njengoba uHulumeni waseSpain evume imali engenayo encane eMkhandlwini Wongqongqoshe ongajwayelekile, abaningi bazamile ukukufeza
Cela impilo yomsebenzi nge-SMS
Uma udinga impilo yokusebenza futhi ungenaso isitifiketi sedijithali noma iphasiwedi yangunaphakade, funda ukuthi ungakucela kanjani ukusebenza nge-SMS.
Ziyini izimpahla? Imiqondo esemqoka
Ukuthengiswa kwempahla kuyisisekelo somnotho, kukhona kohlobo olwehlukile futhi ngezinhloso ezihlukile.
Vuselela isicelo somsebenzi
Uma ungasebenzi, esinye sezibopho zakho ukuvuselela isicelo somsebenzi. Thola ukuthi kungenziwa kanjani.
Bhalisa njengomuntu ofuna umsebenzi
Uma ungazi ukuthi ungabhalisa kuphi njengomuntu ofuna umsebenzi, lapha sichaza konke odinga ukukwazi ukukwenza igxathu negxathu.
Thola ukuthi ikhefu lobuzali liyini, lapho lingajatshulelwa nokunye ukungabaza ukuthi le mvume yakha ukuzalwa noma ukutholwa.
Uyazi kanjani iminyaka efakwe kuhlu
Uma ufuna ukuthi wazi kanjani ukuthi ususebenze iminyaka emingaki, lapha sikunikeza okhiye ukuze ungadingi ukubheka phambili.
Ukuqokwa / ukubhalisela ukungasebenzi
Ukwenza i-aphoyintimenti yokungasebenzi kanye nokubhalisela ukungasebenzi kuyinto eyenziwa yilowo nalowo empilweni yakhe yonke yokusebenza. Uyazi ukuthi ungakwenza kanjani?
Ukusebenza impilo ngemizuzu emi-5
Thola ukuthi ungayifeza kanjani impilo yakho yomsebenzi ngemizuzu emihlanu nje ngesinyathelo nangezindlela ezahlukahlukene ukuze ukwazi ukusebenzisa okungcono kakhulu kuwe.
Konke mayelana nenzuzo yokungasebenzi
Mayelana nenzuzo yokungasebenzi. Izikhathi zesikhathi namanani anelungelo lawo, lapho angakucela khona kanye nezigaba.
ESpain kunezinhlobo eziningi zezinkontileka. Sikutshela izici zomunye nomunye wabo nokuthi benza kanjani ebudlelwaneni bokuqashwa.
Thola ukuthi yini ukuxoshwa kwezigwegwe kanye nemibandela okumele kuhlangatshezwane nayo ukuze kwenzeke enkampanini, kanye nemiphumela yako.
Izimiso ze-Accounting ziluchungechunge lwemithetho okufanele ilandelwe ekuphathweni kwezimali. Thola ukuthi yiziphi futhi zisho ukuthini.
I-accounting eyisisekelo yiyo yonke leyo miqondo okufanele uyazi ukwenza ukuthuthukiswa okufanele kwenkampani. Yithole.
Thola ukuthi yini i-IBI, yiziphi izinhlobo ze-IBI ezikhona nokuthi ungayibala kanjani kalula ngemininingwane embalwa oyidingayo.
Funda ukuthi ziyini izintela ezingaqondile futhi uthole ukuthi yiziphi izintela ezingaqondile okufanele zikhokhwe eSpain minyaka yonke.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ziyini izimali? Thola ukuthi sisho ukuthini ngalelo gama nokuthi lihluke kanjani kunalelo.
Ukubhaliswa Kokuphikisa Okuthunyelwe. Kusuka ku-23/11 kuya ku-2/12 we-2020
Ikholi yokubhalisela izindawo ezinikezwa eposini isanda kuqala. Thola ukuthi ungaziveza kanjani kuzo.
Ukubala i-VAT akunzima, kepha kufanele ucace mayelana nemiqondo yokwazi ukuthi ungayifaka kanjani i-VAT kumkhiqizo noma i-invoice.
Incazelo yokuthi ziyini izimpahla, incazelo yazo ngayinye nokuthi ibhalansi iqukethe ini
I-athikili echazayo yokuthi iyini i-solvency, ukuthi ungayibala kanjani futhi uyihumushe kanjani, ukubaluleka kwayo, nezinhlobo ezimbili zokungakwazi ukukhokha izikweletu ezikhona.
Incazelo yokuthi umholo ophelele uyini, utholakala kanjani emholweni ophelele, yikuphi ukubanjwa okukhona emiholweni yezikhokhelo nasezigabeni zentela yemali engenayo.
Yini inani lemali
Esikhathini esedlule, inani lemali lalingekho. Eqinisweni, zazingekho ngisho izinhlamvu zemali noma izikweletu.
Kunemiqondo eminingi yezezimali engaphezu kokuqonda kwakho. Isibonelo, inzalo ehlanganisiwe, ehlobene nokonga.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngenzuzo yezomnotho, sikumema ukuthi ufunde lokho esikulungiselele kona. Uzozazisa ngakho konke.
I-athikili echazayo yalokho okubiza inani, yiziphi izinto ezibhekwayo, ukuthi ibalwa kanjani nokuthi ingabalwa kanjani kumodeli yomndeni
Inkululeko yezezimali namazinga ayo
Incazelo yokuthi iyini inkululeko yezezimali, amazinga ahlukene okukufeza kanye nezithiyo ezivame kakhulu eziphakamayo.
Ibhizinisi lasebhange, elaziwa kangcono njengebhange, yinkampani enikezela ngezinsizakalo ezihlobene nemali. Funda kabanzi ngabo.
Ukulahlwa kwentela kuyindlela yokuthi imiphakathi ezimele ihehe izinkampani ezinkulu ngokunikeza izikhuthazi. Thola okuningi.
Yazi isibalo sesiqinisekiso sasebhange, izinhlobo ezikhona nezinyathelo okufanele uzithathe ukuthola eyodwa ebhange ngaphandle kwezinkinga.
I-athikili yesilinganiso sokuzimela kwezezimali, incazelo, ifomula yokuyibala, nokuthi wazi kanjani ukuthi ungayichaza kanjani.
Ubunikazi obungenalutho umqondo ophathelene nobunikazi befa. Kepha kuhilela okungaphezulu kakhulu kwalokho. Thola!
Siyini isitatimende sasebhange
Isitatimende sasebhange yidokhumende enikezwe yibhange lapho kukhonjiswa khona konke ukuhamba kwe-akhawunti yasebhange.
Incazelo yalokho okushiwo yi-deflation, iziphi izinzuzo nezinkinga zayo, ukuthi izithinta kanjani ezomnotho, nokuthi zingathinta kanjani namuhla.
Incazelo yokuthi iyini inkomba yeBuffet, itholakala kuphi, ibalwa kanjani, nokuthi ingatolikwa kanjani njengesibikezelo samasheya
Isivumelwano saphakade luhlobo lwenkontileka ongafuna ukuyikhohlwa ngokulahlekelwa ngumsebenzi. Thola amabhonasi, izinhlobo nokuningi.
Amandla Wommeli ngumbhalo okuvumela ukuthi unike amandla omunye umuntu ukuthi akwenzele. Kepha yiziphi izinhlobo ezikhona?
Thola indlela yesimanjemanje yokukhokha manje phakathi kwabantu kanye nezinkampani. Le yiBizum futhi ivumela izinkokhelo eziningi ngokwengeziwe
Yini i-TIN ne-APR
Thola okushiwo yi-TIN ne-APR ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi nebhange ngalo lonke ulwazi oludingayo.
Thola ukuthi yiziphi izisekelo zokunikela, okuyizona ezilawulayo nokwehluka ngamanye amagama adidekile.
Thola ukuthi yini i-DARDE, yenzelwe ini, ukuthi ungaba kanjani nekhadi le-darde nokuthi ungayivuselela kanjani ikhadi lakho lokungasebenzi.
Thola ukuthi yini umuntu okweletwayo nayo yonke imininingwane okufanele uyazi ngalesi sibalo esivame ukudideka kakhulu kwabanye.
Thola konke odinga ukukwazi ngegama lebhizinisi: liyini, litholwa ngubani, kufanele licelwe kanjani, yini umehluko okhona namanye amagama nokuningi.
I-NIF, noma inombolo kamazisi wentela, idokhumenti ebalulekile eSpain. Ayithinti kuphela abantu bemvelo, kepha nezinhlangano ezisemthethweni. Thola okuningi.
Ungaphuma kanjani empilweni yomsebenzi
Thola izindlela ezahlukahlukene okufanele uphume ngazo emsebenzini, okuwumbiko lapho yonke imisebenzi oke waba nayo emsebenzini wakho ibonakala.
Ukunyakaza Kwezakhamizi Sinikeza Ubuso
Yini ebaluleke kakhulu esinayo ezimpilweni zethu? Impela ngaphambi kombuzo onjengalo, impendulo impela ...
Izingozi ezizayo ezilindele izimakethe zamasheya emhlabeni
Ukuhwebelana kwamasheya emhlabeni wonke kubonge ngaphezu kwe-20% ngezikhathi ezimbalwa zokuhweba futhi ...
ICoronavirus inyakazisa imakethe yezimpahla
ICoronavirus ikhombisa nemiphumela yayo emakethe yezinto ezingavuthiwe, ibangele ukukhuphuka nezingqinamba kuye ngomkhakha abakuwo.
Okokuqala, kufanele kugcizelelwe ukuthi igolide lisebenza kahle kuzo zombili izimo zokwehla kwamandla emali nezokwehla kwamandla emali.
Izinyathelo zezomnotho zemiphumela emibi ye-Coronavirus
I-ECB, iFed, nezinye izinhlangano nezikhungo, ziyakhuluma futhi zenze nezinhlelo zezomnotho ngokumelene ne-coronavirus.
Yini izinzuzo? - Ungazuza kanjani kuzo?
Incazelo yokuthi iziphi izinzuzo ezikhona, zivelaphi, nokuthi ibalwa kanjani inzuzo etholwe kuzo, kuya ngenani lenkampani.
Imininingwane yokwazi lapho utshala imali kuma-ETF wezimpahla. Incazelo phakathi kobudlelwano besilinganiso kanye nezinkomba zayo zokulinganisa
I-akhawunti yezobuchwepheshe: ngaphandle kwamakhomishini futhi enezinsizakalo eziningi
I-akhawunti yezobuchwepheshe ibonakala ikakhulukazi ngoba isetshenziselwa ukuphatha imali evela emsebenzini wobungcweti wabasebenzisi.
Izinkampani ezisengozini enkulu ye-coronavirus
Inkinga eChina, ngenxa yokuvela kwe-coronavirus, ayithinti imali ngokweqile ...
Imakethe yezindlu isiqala ukukhombisa izimpawu zokwehla. Kodwa-ke, ayihambelani, ukuthenga nokuqasha kuyahluka ngokwenyuka okubhalisiwe
Ukucwasa kanye nezicupho ezingokwengqondo lapho uqala noma utshala imali ebhizinisini
Incazelo yokuchema kwengqondo kanye nezicupho zengqondo ezivame ukuvela ekutshaleni imali kuze kube sosukwini lwethu nosuku. Ukuzikhomba kuyinzuzo enkulu.
Izinkampani eziqinile futhi ezizinzile ze-Aristocratic Dividend Companies
Incazelo yokuthi yizinkampani ze-Aristocratic Dividend Companies. Imbuyiselo etholakele, ukuthi ungayitshala kanjani imali nokuthi ungayithola kanjani.
Ukwesaba iWuhan Coronavirus kudlulela ezimakethe zezezimali
I-Wuhan Coronavirus ibilokhu isakazeka phakathi kwabantu futhi isabalale ezimakethe zezezimali, yabangela ukuwa okucijile ngenxa yokwesaba.
6 amanani azokwenza abantu bakhulume kulo nyaka
Phakathi kwamagugu azokwenza abantu bakhulume kulo nyaka kukhona ama-typologies wokuthanda kwabo bonke abatshalizimali namaphrofayili.
Ukutshalwa Kabusha Kwesabelo - Ingabe Kungokukhetha Okuhlakaniphile?
Ukutshalwa kabusha kwezabelo kuphakanyiswa njengendlela ephephile yokwenyuka okukhulu komnotho. Incazelo yokuthi iyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Uyini umsele, igama uWarren Buffett abhekisele kulo?
Incazelo yokuthi iyini i-Moat yezomnotho yenkampani, funda ukuyikhomba, nokuthi ungayisebenzisa kanjani emhlabeni wokutshalwa kwezimali
Iphothifoliyo Ehlala njalo ikuvumela ukuthi usebenzise lonke uvuselelo lwezimpahla, ngenkathi unciphisa ubungozi. Ukusebenza kwayo? Kulula futhi kulula
Ama-Stock Screeners - Izinjini zokusesha ukukhetha amasheya athakazelisayo
Incazelo yokuthi ziyini iStock Screeners nokuthi zimayelana nani, amathuluzi okusesha izinkampani. Ukukhethwa kwamakhasi alungiselela la mathuluzi.
Ingabe kufanelekile ukuqasha igumbi?
Eminyakeni yamuva nje, isibalo semizi eqashwe ngamakamelo sikhule kakhulu, uma kuqhathaniswa nokuqashwa kwempahla isiyonke, ngoba okwamanje, inani elijwayelekile lokuqasha igumbi liphakathi kwama-250 nama-500 euros,
Izengezo ezintsha emakethe yamasheya yaseSpain: enye indlela yokutshala imali
IMadrid Stock Exchange ingenye yezinto ezisebenza kakhulu maqondana nezengezo ezintsha ezizofakwa kuhlu ezimakethe zezimali
Amabhange akhipha imali mboleko encane kumakhasimende awo
Imali engenayo yenzalo iyonke ikhule ngo-2,7% yize imvelo inenzalo ephansi eYurophu futhi lokhu kuyindlela ejwayelekile ezenzweni zamabhange.
Sebenzisa ngokuphepha ebhange le-inthanethi
Izinhlangano zezezimali zinezinhlelo zokuphepha ukuze ulwazi oluphakathi kwebhange neklayenti lube yimfihlo, ukugwema izinhlaka zalo zezezimali ze-Intanethi ezinamasistimu okuphepha ukuze imininingwane phakathi kwebhange neklayenti ibe yimfihlo, igweme ukufundwa noma ukukhohliswa kwayo ngabantu besithathu
Yini engenzeka ku-quota yabantu abaziqashile?
Okunye ukungaqiniseki okukhulu abasebenzi abazisebenzelayo noma abazisebenzelayo abanakho yilokho okuzokwenzeka ekukhokhelweni kwabo ngenyanga. Ngoba kuyahamba Okunye kokungaqiniseki okukhulu abasebenzi abazisebenzelayo noma abazisebenzelayo abanakho yilokho okuzokwenzeka ekukhokhelweni kwabo ngenyanga.
Ukubhaliswa nokubhaliswa ku-IGBM yango-2019
I-IGBM, njengoba abatshalizimali baseSpain bazokwazi, yi-General Index yeMadrid Stock Exchange futhi inikezela ngochungechunge lwamanani esitoko ezimeni eziningi i-IGBM, njengoba abatshali bezimali baseSpain bezokwazi, yiGeneral Index yeMadrid Stock Exchange futhi ihlinzeka ngochungechunge lwama-Stock amanani ezimweni eziningi angaziwa ngabasebenzisi
Osebenza ebhange uthola inzuzo yerekhodi
I-Bankinter ngomunye wabamele amabhange amaphakathi anezincomo ezingcono ezivela kubahlaziyi abahlukahlukene bezezimali. Ngisho neBankinter ungomunye wabamele amabhange amaphakathi anezincomo ezingcono ezivela kubahlaziyi abahlukahlukene bezezimali
4 amanani akhulisa amandla akho okukhula
Lo nyaka omusha usilethele isimanga sokuthi ezinye izibambiso ezibhalwe ezimakethe zezimali zithole ukwaziswa okuningi Esinye sezokuphepha esinconywe ngabahlaziyi bezezimali yinkampani yokwakha iFlorentino Pérez, enamandla okukhula abaluleke kakhulu
Ungayiqinisekisa kanjani i-DNI
Iyini i-DNI futhi yenzelwe ini? Sikutshela ukuthi ungayiqinisekisa kanjani i-DNI ukuthi ibe nekhophi evumelekile yoMazisi Wakho Kazwelonke.
Isibopho Esisizayo sabalingani ezinhlotsheni zezinkampani
Isikweletu Esisizayo, sisebenza njengokukhishwa futhi ekugcineni kube yizinsalela uma kungakhokhelwa yinkampani
Umsebenzi womkhakha wezezakhiwo ngonyaka we-2019 ngokungangabazeki uzomakwa ngokudonswa kwempahla eqala ukubonakala ngalesi sikhathi. Al Umkhakha wezezakhiwo ukhule ngo-13% ngonyaka owedlule, yize kungahle kube nokuhluka okuncane kusukela manje kuqhubeke
Uyazi ngempela ukuthi yini i-mesoeconomics?
Ungaba nentshisekelo kwezomnotho, kepha kuze kube manje awukalizwa igama elizonikeza umdlalo omningi kusukela manje, njengeMesoeconomics yizinga eliphakathi nendawo phakathi kwe-microeconomics ne-macroeconomics, okungangabazeki ukuthi izokusiza ulwazi
Incwadi yokwesula ngokuzithandela
Incwadi yokushiya ngokuzithandela, kungumbhalo oxhumana ngawo ngokuhoxa kokuzithandela enkampanini, kule ndatshana sikunikeza yonke imihlahlandlela
Indlela yokungena kabili
Thola ukuthi iyiphi indlela yokufaka ephindwe kabili, uhlelo lapho umsebenzi ngamunye ubhaliswa khona kabili: kanye kudebithi kanti okunye kusikweletu.
Nazi izinto ezibaluleke kakhulu okufanele wazi mayelana nekhefu, izinhlobo zekhefu ezikhona kanye nohlobo lwecala ngalinye
Imibandela yokuqoqa imihlomulo yokungasebenzi
Kule ndatshana sizochaza izidingo zokuqoqa ukungaqashwa kanye nemibandela emincane ukuze sikwazi ukwenza lokho, ngaphezu kwezikhathi zokugcina nezikhathi eziseceleni.
Yini ibhabhu lezomnotho?
Esinye sezimo abatshalizimali abasaba kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi yi-bubble yezomnotho. Akumangalisi ukuthi kuyinqubo eholela ekuweni okukhulu kwesinye sezimo abatshalizimali abasaba kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi yi-bubble yezomnotho futhi okuyingozi kakhulu kunoma yikuphi ukutshalwa kwezimali
Usizo lwabakhulelwe eSpain
Usizo lwabakhulelwe kuleli cala eligxile kunina. Njengoba kuyiqiniso ukuthi izindleko zezomnotho ezihilelekile ekukhuliseni ingane zinkulu kakhulu
Enye yezinkinga ezinkulu osomabhizinisi abaningi abancane naphakathi ababhekene nabo yimbangela yabo enkulu yokuthola ukuhluleka kokuzenzakalelayo Esinye sezixazululo zale nkinga enkulu sivela kumshwalense wokungakhokhi ozoqinisekisa izinkampani ukuthi zingakwazi ukuqoqa ama-invoice azo
Umehluko phakathi kwelayisense lokuvula nelayisense yomsebenzi
Njengosomabhizinisi sifuna ukuvula isitolo, sihlangabezana nezinqubo ezithile eziyimpoqo eziyilayisense yomsebenzi kanye nelayisense yokuvula
Iyini ibhalansi yokukhokha?
Uma kukhona igama elixhumene kakhulu nokubalwa kwezwe noma kwendawo, lokho ngokungangabazeki ibhalansi yezinkokhelo. Akusizi ngalutho, sikhona Uma kukhona igama elihlobene kakhulu nokubalwa kwezwe noma indawo ethile, lokho ngokungangabazeki ibhalansi yezinkokhelo
Kulesi senzakalo, sizochaza ukuthi iyini i-oda yokuphoqelelwa, izici zayo zezimali nezomthetho nezindlela esingazisebenzisa.
Ukuze uqonde izici zomthetho, kubalulekile ukuchaza ikhondomu, njengempahla eyabiwe ngabantu abaningana, abanikazi noma abaphathi.
Ukwehla kwamandla emali kungenye yezinto eziguqukayo ezibaluleke kakhulu emkhakheni wezomnotho kuze kufike ezingeni lokuthatha izinqumo eziningi ezimakethe zamasheya
Singakanani intela esikhokhelwa yibo baseSpain?
Izintela zingenye yezindleko abakhokhi bentela okufanele babhekane nazo ukuze benze kahle umnotho kanye nenqubekela phambili yomphakathi
I-IPREM iyinkomba yemali engenayo yomphakathi yemiphumela eminingi futhi empeleni iyinkomba yokulinganisa ngokugqama eSpain kwe-IPREM ingaba usizo olunamandla ukuze ukwazi ukuqonda ukuthi yiziphi izinzuzo zomphakathi ongazithola
Inkinga eTurkey ishaya i-BBVA
Izizathu ezingaphezu kokwanele zokukhathazeka ngabatshalizimali be-BBVA. Elinye lamavelu ahamba phambili ezimalini zaseSpain libone ukuthi kufanele kukhunjulwe kanjani ukuthi ukuvezwa kwalo kuphakeme kakhulu, nezimpahla zezimali esifundazweni saseTurkey esifinyelela ezigidini ezingama-84.000
Yini engenzeka ekuqothulweni kwenkampani esohlwini?
Kuyinkqubo ezoholela ezinkingeni ezingaphezu kweyodwa kubatshalizimali ngoba ukuqothuka kwenkampani kungenye yezinto ezibucayi kakhulu ezingenzeka emakethe yamasheya
Ngabe ulikhiqiza kanjani igwebu lezezimali?
Sekuyizinyanga ezimbalwa, amazwi amaningi agunyaziwe abelokhu exwayisa ngokuqhuma kwebhola lezezimali. Isimo. Ezinyangeni ezimbalwa, amazwi amaningi agunyaziwe abelokhu exwayisa ngokuqhuma kwebhola lezezimali
Lithini isu le-value chain?
Imiqondo ebaluleke kakhulu okufanele isingathwe ukwenza noma iyiphi iphrojekthi yohlobo lwebhizinisi yilokho okwaziwa njenge-Value Chain.
Izimpahla zamanje zingachazwa njengezimpahla eziwuketshezi namalungelo enkampani noma ibhizinisi, okungukuthi, imali inkampani engayilahla
Isilinganiso somgcinimafa sibonwa njengobudlelwano obuningi obukhona phakathi kobukhulu obubili futhi obusivumela ukuthi sibone isilinganiso sabo
Ama-ejenti wezomnotho aqokelwa kulabo balingisi abangenelela emnothweni, abaneqhaza elithile kanye nesenzo ohlelweni lwalolu hlobo.
Vele, uma ungumtshali-zimali onolwazi oluthile ezimakethe zezezimali, uzobe uzwile ukuthi kuwukuhlakanipha kakhulu ukuthengisa ngaphambi kokuya eholidini.
Kwakuyini ukuhweba okungunxantathu
Umlando obanzi, umzila wohlobo lwezohwebo otshalwe e-Atlantic Ocean, osebenza kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX, lokhu kwaba ukuhweba okungunxantathu
Luyini iPhuli lokubhanga, isibonelo nobudlelwano balo neBhange laseSpain
Idamu lamabhange ngokuvamile lihlobene "nokuxhaswa ngezimali kwangaphandle kwenkampani", lokhu mhlawumbe kungenye yalezo zihloko abantu abambalwa abazi ngazo.
Kuyini ukubhenka kwedijithali?
Ukubhanga ngedijithali kungumqondo omusha futhi omusha emisebenzini yasebhange ongayenza kahle kusuka kuselula yakho
Isikhungo sezezimali sisinikeza, sicubungule futhi sinikeze imalimboleko kumanani wenzalo kanye nesiqinisekiso ngokuya ngenani lesakhiwo
Amanani e-VAT asebenza eSpain nasezinkomba zomhlaba
Le ntela eSpain yakha isisekelo sohlelo lwaseSpain lwentela engaqondile, i-VAT isho i-Value Added Tax.
Izikhwama zase-Angela Merkel ezisalindile zaseYurophu
Izimakethe zamasheya seziyathinteka futhi uma ukuphela kuka-Angela Merkel kuhulumeni kuphelile, ukuwa kungaba nodlame kakhulu
Yini isibalo sehlombe lekhanda lesibalo?
Isibalo sehlombe lekhanda lehlombe ngesinye sezibalo ezilandelwa kakhulu ngabatshalizimali abanolwazi oluningi ezimakethe zezimali
UHulumeni ubeka imikhawulo ezimpeshenini, okuholela kumkhawulo omncane wempesheni kanye nomkhawulo omkhulu wempesheni esizochaza lapha.
Humusha futhi uqonde ijika leLaffer
Ijika leLaffer lingasetshenziselwa ukuhlaziya imiphumela yokwehluka kwamandla emali kunoma imuphi umnotho.
Inkontileka yokuthengisa phakathi kwabantu ngabanye
Inkontileka yokuthengisa ibe ngesinye sezibalo ezibaluleke kakhulu zenkontileka, ngakho-ke sichaza ukuthi singabhalwa kanjani nesibonelo esicacile
Kujwayelekile ukuthi ngesikhathi esithile ezimpilweni zethu sibe nesikweletu enkampanini noma komunye umuntu, kungenzeka nokuthi sikweletwa imali
Vele, iqiniso lokuthi kubalwa impesheni akuwona umsebenzi olula kusukela ekuqaleni, ngoba phakathi kwezinye izizathu eziningi kuzodingeka ucabangele okuguqukayo okuningi
Inombolo yokuphepha komphakathi kungenzeka ingenye yemibhalo ebaluleke kakhulu sonke okumele sibe nayo, ngoba imvamisa iyadingeka lapho kwenziwa izinqubo ezilandelanayo.
Izikhwama zomzimba ezinhle kakhulu ze-idijithali yemali
Izikhwama zemvelo i-Bitcoin iqukethe isikhwama semali yedijithali esifeza umsebenzi ofanayo onayo i-akhawunti yasebhange, imali
Kuneziteshi eziningi zokuvala isiteleka, kusukela emahhovisi kuya kuselula uqobo ukuze sikwazi ukwenziwa ngokusemthethweni kunoma yisiphi isimo
Faka ohlwini ngokushintshisana okuhle kakhulu kwe-idijithali yemali esebenza eSpain. Uma ufuna ukutshala imali kuma-cryptocurrensets (i-Bitcoin, i-Ethereum, i-Litecoin, njll.) Futhi awazi ukuthi iyiphi ipulatifomu ongayisebenzisa, lapha uzothola amapulatifomu aphephe kakhulu anezintengo ezinhle kakhulu. Thenga ama-cryptos ngokuphepha bese uwina u- $ 10 MAHHALA ukuze uqale ukutshala imali!
Iphrimiyamu yengozi yimbuyiselo eyengeziwe enikezwa wutshalo-mali kumsebenzisi ngokuya ngobungozi okufanele abuthathe ngaso sonke isikhathi.
Intela yokuthengiselana kwempahla nezenzo zomthetho ezibhaliwe
Ukuze ukwazi ukukhokha i-Tax on Transmissions Patrimonial Transmissions kanye neMithetho Yomthetho Ebhaliwe, kufanele uye eHhovisi Lezentela
Umusa ngokuyisisekelo ukwanda kwenani lento, ikakhulukazi ingcebo noma utshalomali ezimakethe zezezimali
Uma kunomqondo ongaziwa kubasebenzisi, ngokungangabazeki lowo oxhumene nejika le-laffer
Yazi futhi wazi ukuthi ungaphatha kanjani imali yokusebenza kwenkampani
Okuthile esizokuchazela ngakho kule ndatshana ukwazi ukuthi imali yokusebenza yabaphathi benkampani iqukethe ini?
Yini impesheni yomhlalaphansi engakhokhi
Impesheni Enganikeli kanye nezinzuzo ongazifinyelela ngenxa yalolu hlobo lokuvikelwa komphakathi, ngakho-ke ikusasa lakho lezezimali alisenalo
Izinga lenzalo ngukuguquguquka kwezomnotho okukhulu okusetshenziselwa ukuhlela izinqubomgomo zezimali, kanye nosizo ekutshalweni kwemali.
Ukuba nolwazi ngabalingisi bemalimboleko abahamba phambili, ekugcineni, kuzosisindisa isikhathi esiningi ngisho nemali, ngoba sinemininingwane eminingi futhi engcono
Ukubaluleka kokwazi ama-simulators amahle kakhulu wempahla
Ama-simulators okubambisa ngempahla: ithuluzi elibalulekile labenzeli bezindlu. Impela uyazibuza ukuthi umthengisi wezezakhiwo angazinquma kanjani izidingo zamakhasimende abo
Ukubaluleka kwesivumelwano sediphozithi ekuthengweni kwempahla
Ukugwema lezi zimo ezimbi singaphendukela embhalweni odumile owaziwa ngokuthi yi-Arras Contract, ukuze sikwazi ukuthola ikhaya
Ukubaluleka kokugeleza kwemali kwezempilo
Ukungena kwemali. Ukuze uxazulule izinkinga ezihlobene nokuphuma kwemali nokwenza inzuzo, okuyinkinga engatholwa izinkampani ezintsha.
Ngingathatha umhlalaphansi nini?
Ngemuva kwezinguquko zakamuva ezenziwe uhulumeni okhona manje, iminyaka lapho ungathatha umhlalaphansi ishintshiwe kancane
Kuyini ukuhlanganiswa kwezindlu nomhlaba?
Ukuqoqwa kwezindlu nomhlaba kuyindlela yokutshala imali ukungena emkhakheni wezitini futhi okungenziwa kube semthethweni ngamanani aphansi kakhulu
Siyini isikhwama sesiqinisekiso sediphozithi?
Isikhwama Sesiqinisekiso Sediphozithi siyindlela evikela abasindisayo ekuqothukelweni okungenzeka yizikhungo zezezimali
Buyela ejwayelekile yegolide
Ngaphambi kokuba idoli linamathiselwe njengemali eyinkomba yamazwe omhlaba, kwakukhona uhlelo lwemali oluhlukile, okubizwa nge standard yegolide.
Impesheni enganikeli: ngingayithola?
Izimpesheni ezinikelayo zithathwa njengezinzuzo zomphakathi inhloso yazo enkulu ukuthi ukwanelisa izidingo zakho ezisheshayo
Ungayibala kanjani indawo yokuhlala?
Isivumelwano sihambelana nokukhokhwa kwezinzuzo zenkontileka zoMthetho Wezabasebenzi waseFederal futhi kunikezwa lapho kufakwa isicelo sokushiya umsebenzi ngokuzithandela
Imakethe yezabasebenzi ibonakalise ukululama okuthile eminyakeni yamuva, noma ngabe kungabiza ukwanda kwezivumelwano zesikhashana
Unemikhiqizo eminingana yokuthatha umhlalaphansi ezokwenza ube nengeniso eyengeziwe yokuxhasa impesheni yakho
Ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe emakethe yamasheya kwakhiwa kucatshangelwa imibono yezimakethe zamasheya zikaCharles Henry Dow.
Imodeli 200, yenzelwa ini le dokhumenti?
Imodeli 200 isho ukumenyezelwa noma ukukhokhelwa kweNkampani Yentela kanye Nentela Yemali Engahlali Abantu
Iyini i-CPI futhi iwuthinta kanjani umnotho?
I-CPI ingenye yedatha ebaluleke kakhulu kwezomnotho futhi ingaba yisisekelo ekubumbeni inqubomgomo yezimali yezwe
Eyaziwa nangokuthi "iPhiramidi labaphathi bezidingo zabantu" noma iPiramidi kaMaslow. U-Abraham Maslow (1908-1970)
Yini izimpahla nezikweletu
Noma ngabe ihlobene nomhlaba we-accounting noma wezezimali, imiqondo Izimpahla nezikweletu zizwakala kaningi.
Imodeli 037, yenzelwa ini le dokhumenti?
Ifomu 037 kumele lenziwe libe semthethweni ukuze libhaliswe njengomsebenzi ozisebenzelayo futhi lizodinga uchungechunge lwezimo
Imodeli ye-invoyisi ezimele
Lapho uqala ukusebenza njenge-freelancer, enye yezinkinga okufanele icaciswe kuzoba ukulungiswa okulungile kwe-invoyisi enemodeli ye-invoyisi ezimele
Ukuqoqwa kwezindawo ezithengiswayo kunguhlelo olusha lokutshala imali abasebenzisi abangafinyelela kulo ngemali engabizi kakhulu
Izinyathelo zokubhalisa njenge-freelancer
Uma kwenzeka ukuthi noma yimuphi umsebenzi wenziwa ngqo futhi uqobo, kuzodingeka ukuthi ubhalise njengomuntu ozisebenzelayo.
Ayini uphizi osesikhwameni
Ama- "Chicharros" yilabo abanezinga eliphansi lokwenza imali, imali encane nokuqagela okusobala. Zingathathwa njengesiqeshana esingaphansi kwemakethe yamasheya
Yini i-TIN noma igama lesilinganiso senzalo
Izinga lenzalo (TIN) okuyiphesenti elizokwengezwa enhlokodolobha elethwe njengesinxephezelo ngesikhathi esithile.
IDeshi, ngaphakathi kwama-cryptocurrensets ayi-10 aphezulu
IDash yimali edijithali ebonakala ngezimali eziphansi, isivinini sokuthengiselana okuphezulu namathuba amahle okungaziwa.
I-Monero (XMR), i-cryptocurrency ezalwe ngo-2014
Ubumfihlo obuphelele nobuphelele ekuthengisweni okwenziwe nge-blockchain, okuyiMonero (XMR), i-cryptocurrency ezalwe ngo-2014
I-Bitcoin yisimo semfashini sezezimali
I-Bank of America, imemezela kumakhasimende ayo ngezinhloso zokuthenga ama-Bitcoins, ukuqapha ngokweqile futhi iqaphe kakhulu
Dogecoin, ihlaya le-inthanethi noma i-cryptocurrency ephumelelayo?
UDogecoin uzuze amazinga amahle okuthandwa, lapho abasebenzisi beReddit "indawo yokubhukimakhi yomphakathi kanye ne-aggregator yezindaba", badlale indima enqumayo.
Ukudlidlidliza imali yedijithali noma enye i-cryptocurrency?
Abadali beRipple bathi bazama ukwenza imali lokho i-intanethi ekwazile ukukwenza ngezinhlobo zamafomu wolwazi emhlabeni jikelele.
Ama-cryptocurrensets, indlela yokusebenzisa noma ukutshala imali kuwo
Ake sibhale ezinye izinzuzo zokusetshenziswa kweBitcoin, ngoba iyi-cryptocurrency eyisithenjwa, futhi singaqonda ukubaluleka kwayo nokuthi kungani izimali zedijithali zinqobile.
I-Ehtereum ethembisayo, izici kanye nemihlahlandlela yokutshala imali
I-Ethereum inamandla okusingatha ubunzima obedlula i-Bitcoin, futhi lokhu kungenxa yohlelo lwayo lwenkontileka ehlakaniphile enalo, esizochaza ngokuhamba kwesikhathi.
I-Litecoin endaweni yonke yama-cryptocurrensets: ezinye izindlela zokutshala imali
I-Litecoin ibonakaliswe inani eliphansi uma liqhathaniswa namanye ama-cryptocurrensets, ibilokhu ihamba ngamanani aphansi selokhu yadalwa.